Xiddiga Cristiano Ronaldo oo sii joogaya Juventus xilli ciyaareedka 2021-22. - Iftiin FM
Xiddiga Cristiano Ronaldo ayaa la soo sheegaya inuu go’aansaday inuu sii joogo Juventus xilli ciyaareedka 2021-22, taasoo umuuqata inay soo afjarayso hadal hayntii mustaqbalkiisa.
Xiddigani 36 jirkaan oo galaya sanadkii ugu dambeeyay Heshiiskiisa ayaa lala xiriirinayay inuu xagaaga ka tagayo kooxda Juventus, iyadoo Paris Saint-Germain iyo kooxdiisii ​​hore ee Manchester United ay xiiso u qabeen saxiixiisa.
Xulka qaranka Spian oo bar -baro ku dhaafi waayay xulka Greece.
Xiddiga Edinson Cavani oo iska diiday Kooxaha Real Madrid iyo Juventus.
Kooxda Man United oo ka hadashay saxiixa xiddiga Jadon Sancho.
Ronaldo oo haatan qaata 46.7 milyan mushahar ah sanadkii ayaa keeni karta in uu cadaadis weyn ka qaadmo kooxda hadii uu ka tago kooxda laakiin wali waxa ay rajaynayaan in ay heshiis cusub ka saxiixdaan xiddiga.
Hazard oo go’aan ka gaaray mustaqbalkiisa Ciyaareed.